Nwa agbọghọ dị ịtụnanya Zeineb, nne a nwere ụmụ 3 nke gafere ọnụ ụzọ ifocop ka ọ zụọ dị ka onye nrụpụta webụ ka ọ bụrụ ihe na-erughị otu afọ ka ọ gachara, onye nkuzi na onye isi azụmaahịa nke mmepe Weebụ. Njem pụrụ iche nke ga-akpali ihe karịrị otu!
Ha bụ atọ, n'ime ezinụlọ ya, ịhọrọ otu ụbọchị ifocop ka ọ banye n'ụzọ nke ọzụzụ ọzụzụ ọkachamara: nwanne nna ya (ọzụzụ akwụkwọ ndekọ ego) ịmalite; mana di ya na nwanne ya nwoke, onye chọrọ ịbụ onye nrụpụta webụ n'ihu ya. Ya mere, mgbe ọ banyere, Zeineb maara ebe ọ na-aga. Otú ọ dị, nke ahụ apụtaghị na ọ dịrị ya mfe. "A dọọla m aka ná ntị na enweghị m ndakpọ olileanya, usoro ọzụzụ ifocop nke ọnwa 8, nke a ga-ekekọrịta n'etiti ọmụmụ ihe na imikpu ọkachamara na ụlọ ọrụ, ọ na-esiwanye ike", ọ na-echeta, obi siri ya ike na ọ ga-ajụ ndị ikwu ya ajụjụ ma rụọ ọrụ nyocha nke akọnuche ya tupu ọ bịanye aka n'akwụkwọ mbụ nke ọzụzụ ya.
"Ọkachasị ebe ọ bụ na isi ala, m chọsiri ike ịzụ onwe m na eserese weebụ, ọ bụghị na mmepe na mmemme", ọ na-ekwupụta. Gịnịzi mere nke a ji gbanwee? Naanị n'ihi na ọ dara
Chọpụta ọgbụgba ama Zeineb, onye mmụta ifocop bụ onye ghọrọ onye nrụpụta na onye njikwa azụmaahịa. Ọnwa Iri 24, 2021Tranquillus
GỤỌ Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara Ndekọ nhatanha nwoke na nwanyị
gara agaBụrụ onye nrụpụta ihe ntanetị nwere ifocop
-esonụMounir: "Ọzụzụ a na-anọchi anya m ụdị nke springboard"